७५३ वटै स्थानीय तहबाट कांग्रेसको विरोध : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस नेताको आपत्ति « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 17 January, 2021 7:49 am
काठमाडौं, ४ माघ । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार देशभर भएका कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाए ।
सभापति देउवाले अदालतलाई दबाब दिन नहुने भनिरहेकाप्रति कटाक्ष गर्दै पौडेलले भने, ‘आफूअनुकूल फैसला नआउँदा न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन तम्सिनेहरू अदालतलाई दबाब दिन हुँदैन भनिरहेका छन् । म त्यस्तो दोहोरो चरित्रको कुरा गर्दिनँ, म त्यस्तो मान्छे होइन । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्‍यो भने प्रश्न गर्छु– न्याय छ कि छैन ?’
पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि कांग्रेसलाई नै फाइदा हुने बताए । ‘संसद् पुनस्र्थापना हुँदा पनि हामीलाई नै फाइदा हुन्छ, हामी निर्णायक भूमिकामै छौँ,’ देउवा चुनावतिर लचिलो भएकाप्रति लक्षित गर्दै पौडेलले भने, ‘तालुमा आलु फले तपाईं फेरि प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, किन चुनाव, चुनाव भनिरहनु भएको छ ?’
काठमाडौंको कागेश्वरी नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा भएको सभामा बोल्दै सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकार कामचलाउ भइसकेको बताए । ‘यो सरकार कामचलाउ भइसक्यो, अब यो सरकारले जथाभावी नियुक्ति र बजेट बाँड्न पाउँदैन, यसले कामचलाउकै हैसियतमा काम गर्नुपर्छ,’ महतले भने । डा. महतले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि कांग्रेसले सबै ध्यान चुनावमा लगाउने बताए ।
‘अहिले संसद् पुनस्र्थापना नभए, चुनाव पनि हुँदैन कि भन्ने शंका छ । वैशाखमा निर्वाचन हुनैपर्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनैपर्छ । यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने देशभरि आन्दोलनको आँधीबेहेरी आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि यो सरकार ढल्छ ।’ सहमहामन्त्री डा. महतले ओलीले देशलाई अराजकताको बाटोमा लान खोजेमा वा निर्वाचन सुनिश्चित नहुने अवस्था भएमा कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताए ।
भक्तपुरको मध्यपुरठिमी नगरपालिकामा भएको विरोधसभामा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अदालततिर फर्केर दबाबको भाषा नबोल्न आग्रह गरे । ‘संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीजी सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर दबाबको भाषा नबोल्नुस्,’ शर्माले भने, ‘न्यायाधीश तपाईंको पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य होइनन्, तपाईंको आदेश मान्ने राष्ट्रपतिजस्तो पनि होइनन् । उहाँहरूले संविधान बुझ्नु भएको छ । तपाईंको भाषणको स्क्रिप्ट पढेर होइन । संविधान हेरेर फैसला गर्नुहुन्छ ।’
कांग्रेसले देशभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोधमा उत्रिएको कांग्रेसले शनिबार सबै नगरपालिका–पालिकाका केन्द्रबाट विरोध गरेको हो ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको १९ पुसको निर्णयबमोजिम सरकारविरुद्ध विरोध ¥याली र विरोध सभा गरेको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम एवं सर्वसत्तावाद, कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले जनताको भावना अभिव्यक्त गरेको बताए ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले विरोध प्रदर्शन र सभामा सहभागी हुने सबैलाई बधाई तथा धन्यवाद समेत दिएका छन् । कांग्रेसले यसअघि २५ पुसमा सातै प्रदेशका तीन सय ३० वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका मुकामहरूबाट विरोध गरेको थियो भने १३ पुसमा एक सय ६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।
यसपछि आगामी बिहीबार देशैभरका ६ हजार सात सय ४३ वटै वडाका केन्द्रहरूमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कांग्रेसको तयारी रहेको छ । जिल्ला, क्षेत्र र पालिकास्तरमा जस्तै वडास्तरका कार्यक्रममा पनि थप क्रियाशील भएर सशक्त विरोध प्रदर्शनका लागि तयारी रहन देउवाले आग्रह गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट